Doorashada golaha deegaanka dhallinyarada ee Göteborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Doorashada golaha deegaanka dhallinyarada ee Göteborg
doorashada golaha dhallinyarada Göteborg
La daabacay måndag 19 november 2012 kl 11.45
Manta oo Isniina ah waxaa magaalada Göteborg ku soo gabe-gaboobeysa doorasho golaha deeganka ee dhallinyarada. Doorashadaan golaha degmada ee dhallinyarada ayaa soo bilaamatay sannadka markuu ahaa 2005 taas oo ay codeyn karaan kana qayb galikaraan keliya caruurta iyo dhallinyarada magaalada. Ujeedka golaha dhallinyarada degmada ayaa ah sidii ay dhallinyarado saameyn ugu yeelan lahaayeen su'aalaha taabanaya caruurta iyo dhallinyarada, una baran lahaayeen demokratiyada iyo siyaasada.
13 sanno jir Angela Baric waxay hal sanno fadhidey golaha deegaanka dahllinyarada, hadana waxay u taagantahay in marlabaad la doorto, iyada oo ka sharaxan xaafadda bariga Göteborg.
- Sannadkaan waa kii iigu horeyey hadana waxaan u sharaxanahay in lay doorto. Waa arinn fiican oo waayo arignimo laga korarsan karo. Waana wax fiican in saameyn lagu yeesho arimaha quseeya dhallinyarada magaaladan, ayey tiri.
Fikrada ka denbeysa golaha deegaanka dhallinyrada (ungdomsfullmäktiga) Göteborg ayaa ah in la siiyo caruurat iyo dhallinyarada fursado ay saameyn ugu yeelan karaan siyaasada magaalada ee taabaneysa ayaga, iyo in la kordhiyo xiisaha ay dhallinyarado u hayaan demokratiyada iyo siyaasada. Sannadkaan waxaa maantay la soo gabe-gabeynayaa doorashadii sagaalaad, codbixiyaasha iyo utartamayaasha ayaa ah ardeyda ay da'dooda u dhaxeyso 12 ilaa 17 sanno jir ee ka diiwaan gashay magaalada Göteborg. Golaha deegaanka dhallinyarada ayaa ka kooban 81 xil-dhibaan iyo 20 xil-sugayaal, degmo kastana waxay leedahay koraas u qoondeysan inta caruur iyo dhallinyaro ee degmadaas ku nool . Xildhibaan kasta xilka waxa uu heynayaa mudo hal sanno ah, kabacdiina waxaa la qabanayaa doorasho markale.
- Xogheynta golaha degmada waxa ka masuul-tahay in ay dhallinyarada barto arimaha demokratiyada. Dhallinyaradaan kama tirsana xisbi siyaasadeed, balse waxay baranayaan demokratiyada iyo sida saameyn loogu yeelan karo su'aalaha saameynaya dhallinyarada. Arintaas oo ku bartaan waxay inta iskuulka dhiganayaan, ayey tiri Monica Wennerström oo ah maamulaha golaha degmada dhallinyarada.
Sida golaha caadiga ah ee degmada ayey u shaqeeyaan gudiyo kala gedisan golaha dhallinyarada ee degmada. Tusaale waxaa jira gudi ka shaqeeya arimaha quseeya xili firaaqeedka iyo shaqo u buurida dhallinyarada xilliga fasaxa ee xagaaga, sidoo kale gudiyo ka shaqeeya arimaha gaadiidka dadweynaha, sinaanta iyo ka hortagida cayda iy aflagaada ayaa jira. Angela Baric wax yaabaha aad u xiseyneyso in ay wax qabato hadii la doorto waxa weeye gaadiidka dadweynaha ee magaalada.
- Waxaan guud ahaan u gubanayaa in dhallinyarado ay tilaabo horey u soo qaadaan oo ay soo bandhigaan afkaartooda. Gaar ahaan waxaan doonayaa in raashinka iskuulka la hagaajiiyo iyo gaadiidka dadweynaha, arimahaas ayaa kamid ah su'aalaha aan aamnisanahay in ay muhiim yahiin.